လီမာကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိက de ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario
ပင်မစာမျက်နှာ ဂေါက်သီးဘောလုံး ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအများ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' Fenomeno ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အစောပိုင်းကလေးဘဝဘဝ
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံ
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de လီမာသည်သူ၏ဖခင်, Nelio Nazario က de လီမာ, ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏နှင့်မိခင်ဆိုနီယာ dos Santos Barata အားဖြင့် Rio de Janeiro မြို့, ဘရာဇီးအတွက်စက်တင်ဘာလ 18 ၏ 1976th ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကစုံတွဲတစ်တွဲ၏တတိယကလေးကဖြစ်ခဲ့သည်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကျောင်းကိုသူ့ကိုပို့ပေးရန်ရုန်းကန်သူတစ်ဦးဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေရောက်လာတယ်။ သူကအများအားဖြင့်ပညာရှင်များ၏ဧရိယာ၌သူ၏ကြီးထွားလာနှစ်များတွင်ကလေးတစ်ဦး prodigy အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပျက်သည့်အခါကျောင်းတွင်သူ၏တိုးတက်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို 11 များ၏အသက်အရွယ်မှီတိုင်အောင်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူ့မိဘ, NélioNazárioက de Lima နှင့်ဆိုနီယာ dos Santos Barata, ကွဲကွာသူသာ 11 အခါ၎င်းတို့၏အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများသွားလေ၏။ သူ့ကိုဂရုစိုက်ဖို့အဘယ်သူမျှမထားရှိခြင်း, ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de လီမာကျောင်းထွက်ခဲ့ရသည်။ အဲဒီအခြိနျမှာသည့်အတိုင်းနည်းနည်း Moni ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလမ်းပေါ်မှာဘောလုံးပြိုင်ပွဲကစားရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဆက်လက်ရှင်သန်ရန်အရှာပုံတော်အတွက်ဘောလုံးမတ်ေတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစုဘဝ
သူကဘရာဇီးမော်ဒယ်နှင့်မင်းသမီးတွေ့သောအခါရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de လီမာရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအသက်တစ်နှစ် 1997 အတွက်အများပြည်သူသွား၏ စူစန်နာ Werner သူက '' Malhacao '' ဟုခေါ်သည့်လူကြိုက်များဘရာဇီးလ်ရုပ်သံဆပ်ပြာအော်ပရာထံမှလေးစားသူ။
စူစန်နာ Werner နှင့်အတူရော်နယ်ဒိုရဲ့ဆက်ဆံရေး
သုံးဖြစ်စဉ်များအတွက် featured ခံရဖို့ကသူ့တောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဖြည့်ဆည်းရသောအခါသူတို့နှစ်ဦးစလုံး၏မေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဤသည် 1999 ၏အစအဦးသည်အထိကြာမြင့်သောရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးသတိပေးခံရ။
တဦးတည်းကြားဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်တိုင်းမင်းသမီး '' ယောက်ျားဆန္ဒစာရင်း၏ထိပ်မှာသူ့ကိုယ်သူတွေ့သူတိုက်စစ်မှူးများအတွက်အခြားတစ်ဦးအစအဦးဆိုလိုသညျ။ နောက်ပိုင်းအဲဒီနှစ်, ရော်နယ်ဒိုသည်ယခင်အမျိုးသမီးဘရာဇီးဘောလုံးသမား Milene Domingues နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။
Milene Domingues နှင့်အတူရော်နယ်ဒိုရဲ့ဆက်ဆံရေး
သူမကိုယ်ဝန်ရတယ်မှီကအချိန်မယူခဲ့ပါဘူး။ သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်စောင့်ကြည့်ပေါ်၌ရော်နယ်ဒိုဟာ ALTER မှသူမ၏ယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးဧပြီလ 1999 အတွက်လက်ထပ်တယ်။ ဧပြီလ6၏ 1999th တွင်, Milene ရော်နယ်ဒို၏ပထမဦးဆုံးသား, မီလန်အတွက်ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘွားမြင်လေ၏။
သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးသူတို့ကွဲကွာရသောအပြီး4နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့သည်။
2005 မှာတော့ရော်နယ်ဒိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပေမယ့်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခံစားခဲ့ရသူကိုဘရာဇီးမော်ဒယ်နှင့် MTV စတား Daniela Cicarelli စေ့စပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအတိုဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ကသာသုံးလ£ 700,000 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့သူတို့ရဲ့ luxirious မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားအပြီးကြာခဲ့သည်။
2005, ရော်နယ်ဒိုဟာဖျော်ဖြေထိုနှစ်တွင်ပင် ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းစမ်းသပ် သူအလက်ဇန်းဒါးအမည်ရှိကောင်လေးတစ်ယောက်၏ဖခင်ဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ကောင်လေးကရော်နယ်ဒိုနှငျ့ Michele Umezu, ရော်နယ်ဒိုပထမဦးဆုံး 2002 အတွက်တိုကျိုမြို့ရှိတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်သူကိုဘရာဇီးစားပွဲထိုးများအကြားတစ်ဦးအကျဉ်းဆက်ဆံရေးဟာအပြီးမွေးဖွားခဲ့သည်။
အရှုပ်တော်ပုံ: ဧပြီလ 2008 မှာတော့ရော်နယ်ဒိုသုံးပတျသကျတဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် လုပ်ကြံ သူ၏မွို့၌တည်ရှိသောနိုက်ကလပ်များတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်သူကိုပြည့်တန်ဆာ ရီယိုဒီဂျနရို။ သူတို့တရားဝင်အထီးဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိပေါ်၌ရော်နယ်ဒိုစွန့်ခွာဖို့သူတို့ကို $ 600 ပူဇော်ကြ၏။ ယခုAndréia Albertini ကွယ်လွန်သုံးယောက်, တစ်ခုမှာ $ 30,000 တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းတွင်မီဒီယာကိစ္စနှင့်ထိတွေ့။ မာရီယာ Beatriz အားမိမိအိမ်ထောင်ကိုချက်ချင်းအရှုပ်တော်ပုံအပြီးဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုကိစ္စအပေါ်အများကြီး ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဤအချိန်, မေတ္တာသူတို့ကိုလောင်လေ၏။
အဆိုပါ 24th ဒီဇင်ဘာလ 2008 တွင်မာရီယာ Beatriz အန်တိုနီ Rio de Janeiro မြို့အတွက်, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသမီးမာရီယာ Sophia ဘွားမြင်လေ၏။
ဧပြီလ 2009 မှာမိသားစုတစ်စုလုံးအသစ်တခုသို့ပြောင်းရွှေ့ penthouse ဆောပိုလိုပါ။6ဧပြီလ 2010 တွင်မာရီယာ Beatriz အန်တိုနီဟာသူတို့ရဲ့ဒုတိယသမီး, ဆောပိုလိုအတွက်မာရီယာအဲလစ်ဘွားမြင်လေ၏။ တိုက်ဆိုင်မာရီယာအဲလစ်သူမ၏အစ်ကိုရော်နယ်အောင်နိုင်မွေးဖွားခဲ့သည်အတိအကျ 10 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်ထိုနေ့မွေးဖွားခဲ့သည်။
မိမိအစတုတ္ထသူငယ်၏အတည်ပြုချက်ကိုပွီးနောကျ, စီရော်နယ်ဒိုသူတစ်ဦးရှိခဲ့ဖူးကြောင်း6ဒီဇင်ဘာလ 2010 အပေါ်ဖော်ပြထား vasectomy, သားသမီးလေးယောက်ရှိခြင်းအလုံအလောက်ခဲ့ကြောင်း feeling "ဟုအဆိုပါစက်ရုံပိတ်ဖို့" ရန်။
ရော်နယ်ဒို Nazario က de Lima နှင့်မိသားစု
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ပထမဦးစွာသားတော်ရော်နယ်အောင်နိုင်နှင့်အတူ relationship ။
သူတို့ကမိတ်ဆွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ပုလ်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမမသေချာမရေရာမှုများရှိပါသည်တည်ရှိ။ ရော်နယ်ဒို (ဖခင်) နှင့်ရော်နယ်အောင်နိုင် (သားတော်ကို) အကြားထိရသေးသောစိတ်ခံစားမှုမရှိခင်းကျင်းရှိတယ်တည်ရှိ။
ခမညျးတျောလိုပဲ Son- ရော်နယ်ဒိုနှင့်ရော်နယ်အောင်နိုင်လိုပဲ
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အစောပိုင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှ Start
သူကဘောလုံးယူပြီးနောက်အနိုင်နိုင်တဦးတည်း6လ, ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de လီမာသည်သူ၏ဒေသခံဧရိယာ၌ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်သမျှသောဘောလုံးပွဲတစ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကသူ့အကျပ်အတည်းများကသိတယ်သူ့ကိုအလျင်အမြန်တိုးလိုသူသည်သူ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများအနေဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်။ ဘောလုံးမှဤသည်မှာအစောပိုင်းစတင် Bento ဖွစျပါတယျ Ribeiro, Rio de Janeiro မြို့တစ်ဆင်ခြေဖုံး၏လမ်းများအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစကမ္ဘာကဘောလုံးကွင်းများ၏အလွန်ထိပ်ကသူ၏ထူးခြားဆန်းကြယ်မြင့်တက်စတင်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။
စီရော်နယ်ဒိုကိုလယ်မှာမိမိတော်လှန်ရေးလမ်းကျွမ်းကျင်မှုတခုအဖြစ်သူ့ကိုအားပေးပြီးမှအားလုံးအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချ။ သူကအဲဒီအခြိနျမှာဘောလုံးနည်းပြများနှင့်ကင်းထောက်နှစ်ဦးစလုံးသူတစ်ဦးဘရာဇီးဒဏ္ဍာရီ Jairzinho အားဖြင့် spoted ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်သူ၏အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ချွတ်ပေးဆောင်။ မိမိအအလားအလာသက်သေခံပေါ်၌ Jairzino သူ့ယခင်ကလပ် Cruzeiro ဟောင်းများကိုထို 16 တစ်နှစ်အကြံပြုခဲ့သည်။
ကလပ်နဲ့သူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်ရာသီမှာတော့ရော်နယ်ဒို 44 ဂိမ်းတစ်ခုအံ့သြ 44 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူခြင်းဖြင့်စံချိန်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မိမိအရှိန်ပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာအရှိန်, အစွမ်းထက်ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်နှင့်တစ်ဦးအနီးကပ်ထိန်းချုပ်ပေါင်း technique ကိုအားလုံးဘောလုံးကွင်း pundits နှင့်ပရိတ်သတ်များ wowed ။ သူ၏အဆက်စွမ်းဆောင်ရည် 1993 အတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးဘရာဇီးဖလားချန်ပီယံဖို့ကလပ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ချိန်, လူတိုင်းသူ့ကို '' တောင်းဆိုစတင်နယူး Pele '' သူ 1958 အတွက်အလွန်တူညီအသက်အရွယ်မှာစတင်ခဲ့သည့်အခါ Pele ၏ပုံနဲ့ဆင်တူသူ၏ဘောလုံးပုံစံကိုကျေးဇူးတင်။ ရော်နယ်ဒို 17 တစ်ဦးနူးညံ့သောအသက်အရွယ်မှာကြီးမားသောအမျိုးသားရေးအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိခဲ့မှီကနည်းနည်းအချိန်ကိုယူ။
Moreso, သူ့စွမ်းဆောင်ရည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျင်းပခဲ့သောအဆိုပါ 1994 ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုမှသူ့ကိုအလိုအလျောက်လက်မှတ်ကိုပေး၏။ မိမိအနိုင်ငံသားအဆိုပါဖလားရရှိခဲ့သည်အဖြစ်သူခုံတန်းလျားကနေယှဉ်ပြိုင်မှုစောင့်ကြည့်သော်လည်း။
မကြာခင်မှာပဲအလုံအလောက်ဥရောပကမ်းခြေမှရော်နယ်ဒိုရဲ့အကြီးအခွက်တဆယ်ပျံ့နှံ့၏စကားလုံးဘရာဇီးရဲ့ 1994 ကမ္ဘာ့ဖလား၌မိမိပါဝင်မှကျေးဇူးတင်စကားကစားသမားအနိုင်ရတဲ့, သူသည်နောက်ဆုံးတွင်ဘောလုံးအတွက်ထို့နောက်အကောင်းဆုံးကင်းထောက်ယခင်ကရော်နယ်ဒိုရဲ့တူးဖော်ဘဲလျက်တစ်ဦးအဖြစ် regaded ကြီးစွာသော Piet De Visser က scouted ခဲ့သည် Romário compatriot ။
ဒေသအဆင့်မှာမိမိစွမ်းဆောင်ရည်သူ့ကိုကမ္ဘာကြီးကိုဖလားပြီးနောက် PSV Eindhoven တစ်ဦးလွှဲပြောင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ဘရာဇီးကနေကစားသမားများအတွက်အစဉ်အလာရှိသောကြောင့်ရော်နယ်ဒိုကိုလက်ခံသူတို့၏ကြီးမားသောအပြောင်းအရွေ့ရှေ့တော်၌ထိုဥရောပဂိမ်းသင်ယူဖို့ဟော်လန်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်ကိုသွားတော်မှာ။ မိမိအစာချုပ် 1994 အတွက်နယ်သာလန်အတွက် PSV Eindhoven မှရောင်းချခဲ့သည်သည့်အခါရော်နယ်ဒိုထိပ်တန်းထစ်ဥရောပယှဉ်ပြိုင်ဆန့်ကျင်ဂိမ်းနှုန်းနီးပါးရည်မှန်းချက်ပျမ်းမျှ running မြေပြင်ကိုနှိပ်ပါ။
သူ 54 ဂိမ်းထဲမှာ 57 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူ PSV Eindhoven မှာနှစ်ခုရာသီကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အဆိုပါအမှတ်ရစရာတစ်နှစ်တာ 1996
ဒါဟာ 1996 ၏နွေရာသီဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှုအရာအများကြီးဖြစ်ပျက်ဘယ်မှာတစ်နှစ်ကြာ။ တစ်နှစ်မိုက်ကယ်ဂျွန်ဆင်အတ္တလန်တာအိုလံပစ်မှာနှစ်ဆကိုရွှေအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကြာအင်္ဂလန်ဧည့်ခံခြင်းနှင့်လုနီးပါးဥရောပချန်ပီယံရှစ်၏နောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒုက္ခ၏ငါးအထုပ်အဆိုပါ Spice Girls ဟုခေါ်တွင်တစ်နှစ်ကြာသူတို့ကယ့်ကိုတကယ်လိုချင်သောအရာကိုသူတို့လိုခငျြသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကတစ်နှစ်, Hotmail ရုံတီထွင်ခဲ့သညျ။ တစ်ဦးကနှစ်တွင် Fugees ညင်သာစွာထိုသီချင်းကိုအတူကျွန်တော်တို့ကိုသတ်ကြ၏။ တစ်နှစ်နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားတောင်အာဖရိက၏ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အဖြစ်ချနင်းခဲ့သည်။ တစ်နှစ်မင်းသားချားလ်စ်နှင့်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာကွာရှင်းစာတမ်းများလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသည်။
ကအမည်အားရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de လီမာတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာရုံစိုက်မှုအတွက်အိမ်ထောင်စုနာမကိုအမှီဖြစ်လာခဲ့သည်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဘာစီလိုနာပျော်စရာအဘို့အရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဂိုးသွင်းနိုင်သူကို PSV Eindhoven ကနေရယ်မိုက် 19 နှစ်အရွယ်ဆိ (စီရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de လီမာ) ယူသွားစေချင်သနည်းယခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဒီအချိန်ကာလအတွင်းကြောင်း, Sir Bobby ရော့ဘ်ဆန်ခဲ့ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို ဘာစီလိုနာမန်နေဂျာနှင့်လက်ထောက်မန်နေဂျာအဖြစ်ရော်နယ်ဒိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုယူအီးအက်ဖ်အေ Cup Winners 'Cup နှင့် Copa del Rey ဘုန်းအသရေဖို့ကလပ်ဦးဆောင်လမ်းပြ။
ကိုယျတျောသသူသာတစ်ခုတည်းရာသီအတွက်ဘာစီလိုနာနှင့်အတူနေထိုင်ရန်ပေမယ့်ကလပ်နဲ့သူ့ရဲ့ကာလ၌ပြောရာမှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့လိမ့်မယ်။ သူ 47 ဂိမ်းထဲမှာ 49 ဂိုးသွင်းနှင့်လည်းအစဉ်အဆက်ယခုနှစ်ဆု၏ဖီဖာကမ္ဘာ့အ player ကို, ယနေ့အထိရပ်တည်တဲ့စံချိန်အနိုင်ရအငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။
20 နှစ်ရှိပြီမှာ, ရော်နယ်ဒိုဟာကမ္ဘာ့မတိုင်မီမြင်တွေ့ဖူးပြီးသွားတဲ့စံပြသခဲ့သည်။
သူ၏စကားအတွက် ... "ကျွန်မအပေါငျးတို့သကာကွယ်စောင့်ရှောက်အဖြစ်ဂိုးသမားဖြတ်သန်းပြီးနောက်ဂိုးသွင်းဖို့ချစ်ကြတယ်။ ဤသူကားငါ၏အထူးသော်လည်းငါ့အလေ့အထမဟုတ်ပါဘူး။ " - ရော်နယ်ဒို.
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အဆိုပါအင်တာမီလန်မီလန်ခေါ်ရန်
ပိုက်ဆံယခုနှစ် 1998 အတွက်ဘောလုံးအတွက်စကားပြောစတင်ခဲ့သည်။ အဲဒီနှစ်ကဘာစီလိုနာရော်နယ်ဒိုများအတွက်အင်တာမီလန်မီလန်ကနေ£ 18 သန်း၏တစ်ဦးထို့နောက်ကမ္ဘာ့စံချိန်လေလံလက်ခံခဲ့သည်။
တဦးတည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှဆင်း back ဖို့ဘယ်တော့မှမ, ရော်နယ်ဒိုအီတလီဘီလူးကြီးမှပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်။ မိမိအပွဲဦးထွက်ရာသီဟာကမ္ဘာ့ရဲ့ကြယ်ပွင့်ကစားသမားများထံမှမျှော်လင့်ထားရန်ရောက်လာသောအရာ၏ပုံမှန်ခဲ့ - 34 ပိုပြီးရည်မှန်းချက်များနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်ထို့ထက် ပို. မှတ်တမ်းများလည်းကျိုးခဲ့သညျ။
ထို့အပြင်ဂုဏ်သိက္ခာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံးက D'scooping သို့မဟုတ်စဉ်ရော်နယ်ဒိုအစဉ်တစ်နှစ်တာဆု၏ဖီဖာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမား back ပြန်အနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အဆိုပါ 1998 ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံးအဆင့်ကို
အဖြစ်ဝေးကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်ကိုသွားအဖြစ်, ဘရာဇီးနှင့်ပြင်သစ်အကြား 1998 ထွက်ကစားတပိုကောင်းတဲ့ script ကိုဖူးပါဘူး။ ဘရာဇီးသူတို့ 1994 အတွက်အနိုင်ရပန်းဦးရစ်သရဖူကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ရှာဖွေနေစဉ်တွင်, ပြင်သစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရွှေဖလားအနိုင်ရရှာဖွေနေ, အိမ်မှာကစားခဲ့ကြသည်။ ဒီဂိမ်းလည်းနှစ်ခုဒဏ္ဍာရီ Zinedine ဇီဒန်းသည်ကိုယ်တော်တိုင်ရောထွေးကသူ့ပရိသတ်တွေ၏တပြင်လုံးကို left တဲ့စိတ်ကူးအငြင်းပွားဖွယ်ရာအတွက်အစပြုခဲ့တဲ့ဘရာဇီးရော်နယ်ဒို, လှမျးမိုးနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအယူကိုမြင်တော်မူ၏။
စဉ်းစားကြည့်ပါတစ်ပြန်ခေါင်းထောင်လာသောပြင်သစ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်သွားစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ this- ရော်နယ်ဒို, ဘရာဇီးရဲ့ရွှေရောင်ကောင်လေးကရုံနာရီဂိမ်းမတိုင်မီနေမကောင်းကျဆင်းခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားအစီရင်ခံစာများမကြာမီတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးစိတ်ဆိုးအစာအိမ်ခံစားနေရပြီးခဲ့အသစ်များကိုပုံပြင်များဘို့လမ်းကိုဖန်ဆင်း။ ပိုများသောဆင်ခြေအစာအဆိပ်သင့်ခြင်းမှသူ့မေတ္တာအသက်တာ၌ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများအထိဆက်ရေးခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထို devestating အမှန်တရားလည်းဘရာဇီးအသင်းဆရာဝန် Lidio Toledo အားဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်: ရော်နယ်ဒိုနောက်ဆုံးမီညကသူ့အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကွောဆှဲခွငျးခံစားနေရပြီးပြီးနောက်ဆေးရုံအမြန်ပို့ခဲ့သညျ။
သို့သော်ပုံပြင်၌အခြားသောလှည့်ကွက်ရှိ၏။ အဲဒီအစားသူရဲကောင်းဆန်ဆန်ကမ္ဘာ့ဖလားဘုန်းအသရေမှဘရာဇီးဦးဆောင်၏, ရော်နယ်ဒိုသည်သူ၏အနာရောဂါချွတ်လှုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနှင့်တိုက်စစ်မှူးအနေဖြင့်တန်းတူစွမ်းဆောင်မှုကိုအောက်တွင်တစ်ဦးဘရာဇီးကျော်အနိုင်ရနေတဲ့နာမည်ကျော် 3-0 မှနှစ်ကြိမ်ဦးဆောင်ပြင်သစ်ဂိုးသွင်းရန်သေချာသော Zinedine ဇီဒန်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
"ကျနော်တို့ကကမ္ဘာ့ဖလားဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်ကျွန်မနောက်တစ်ခွက်အနိုင်ရ - ငါ့အသကျ" - ရော်နယ်ဒို (ထို 1998 ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံးခန့်)
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ဒဏ်ရာပုံပြင်
အတော်များများကအလားအလာအလွန်ကြီးစွာသောဘောလုံးသမားများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခြိမ်းခြောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။ မိုက်ကယ် Owen တစ်ကြိမ်သည်မိမိလျှပ်စီးအရှိန်အဟုန်အဘို့ကိုကွောကျရှံ့သူတစ်စုံတစ်ဦး, ရော်နယ်ဒိုကဲ့သို့တူညီသောဒဏ်ရာရင်ဆိုင်ခဲ့သူတစ်ချိန်ကခဲ့တစ်ဝက်ကစားသမားဖြစ်လာရန်မပြန်နိုင်ဘူး။ ရှင်ပေါလု Gascoigne, ကျားတောအုပ်, ဂျိုးကိုးလ်, ဂယ်ရီနဗီးလ်နှင့်အများအပြားပိုပြီးအားကစားသမားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆုံးသတ်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုဘယ်တော့မှပြန်လာနိုင်ဘူး။
ကြွင်းသောအရာကနေအကြီးအဝေးကှာတဲ့ပါးလွှာတဲ့လိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လာရန်တစ်ခက်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုပိုခက်လား အကောင်းဆုံးကို, ကျဆုံးခြင်းဖြစ်လာစေရန်, ချွတ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အပြန်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လာရန်မြင့်တက်လိမ့်မည်။ ဒီအစီရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ဒဏ်ရာဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
1998 World Cup ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်တစ်ကျော့ပြန််. အဆိုပါ 1998 ကမ္ဘာကြီးဖလား၌ပြင်သစ်ဂိုးသမား, Barthez အတူတိုက်မှုဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
သူကနောက်ပိုင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဦးထုပ်နှင့်အတူမန်ယူအသင်းသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံကနေသူ့ကိုရပ်တည်မှုထူထပ်ရရှိခဲ့ရာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှကွာလှည့်စား, သို့တိုက်မိခြင်းနှင့် 98 ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုနောက်ဆုံးသူ့ကိုဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ Barthez, အပေါ်သူ၏လက်စားချေကိုယူ။
THE 1999 / 2000 ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်တစ်ကျော့ပြန်- နိုဝင်ဘာလ 21 တွင်st တစ်ဦးစီးရီးအေအတွက် Lecce ဆန့်ကျင်တစ်ဦးကတိုက်ပွဲဖြစ်ကစားနေစဉ်အတွင်းရော်နယ်ဒိုတစ်ဦးဒူးအရွတ်ထိခိုက်အဖြစ် 1999, အဖြစ်ဆိုး, တဖနျလေ၏။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်5လအတွင်းပြီးနောက်ဘရာဇီးလာဇီယိုဆန့်ကျင်အီတာလီယာဒုတိယနောက်ဆုံး၌သူ၏ပြန်လာလုပ်ပေမယ့်သူလယ်ပြင်ပေါ်ရုံ7မိနစ်အကြာတွင်တူညီဒူးတစ်စက္ကန့်, ပိုမိုလေးနက်သောဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်တစ်ကျော့ပြန်မဆိုမျှော်လင့်ချက်ချိုးဖဲ့ခဲ့ကြ ။ သူကတစ်ဦး stratcher အားဖြင့်ပယ်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သူ 2001 / 2002 ရာသီအဆုံးအထိကိုထပ်မကစားမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုခြင်းအားဖြင့်, သူတစျနှစျအဘို့အထွက်ခဲ့သည်။ သူကသာတဆယ်ခြောက်ဂိမ်းအဘို့ထင်ရှားအင်တာမီလန်ကြောင့်ရာသီအဘို့ကိုသာ7ရည်မှန်းချက်များဆှဲ။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -Post ကိုအင်တာမီလန်မီလန်ခေတ်
ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးနောက်ရော်နယ်ဒိုဂျပန် / ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ 2002 ကမ္ဘာ့ဖလားသူ့ကစားသမားအတွက်သူ့ကိုထည့်သွင်းရန်ဘရာဇီးမန်နေဂျာ Luiz Felipe Scolari စည်းရုံးဖို့လုံလောက်တဲ့အားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အမြန်နှုန်းနှင့်သွက်လက်အပေါ်သူ၏မှီခိုအားအစားထိုးရန်သူ၏ဂိမ်း redeveloped တော်မူပြီးမှ, ရော်နယ်ဒိုသည်မိမိ Post-ဒဏ်ရာကာလ၌ကွဲပြားခြားနားသောကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာခွန်အားနှင့်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတိုးတက်လာသောမျက်စိအပေါ်ပိုပြီးမှီခို။ ဤသည်ကိုသူတှေ့အကွုံမြားမှတဆင့်ရရှိခဲ့သည်။ သူအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်ရန်ကစားသူ၏သစ်ကိုစတိုင်ပွဲထုတ်မိတ်ဆက် - တစ်ဖန်နောက်ဆုံးဖို့ဘရာဇီးလမ်းညွှန်နှင့်ဂျာမနီနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့။ အားလုံး pre-ပွဲစဉ်ဆွေးနွေးချက် 1998 ထံမှသူ၏နတ်ဆိုးများကျော်လွှားရော်နယ်ဒိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက် - တို့နှင့်ပြုမိကသူတို့ကိုကျော်လွှား။
အဆိုပါဘရာဇီးသူအခြားကမ္ဘာကခွက်ကိုနောက်ဆုံးဦးတည်ဘရာဇီးပဲ့ထိန်းခြင်းနှင့် 2002 ဂိုးသွင်းရှိရာအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်ရန်2ကမ္ဘာကြီးဖလား၌မိမိအသစ်ကိုစတိုင်ပြသလိုက်ပါတယ်။ သူဟာပြိုင်ပွဲအတွက် 8 ဂိုးသွင်းနှင့် MVP အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ထိုနှစ်တွင်ပြန်တစ်နှစ်ဆုလာသည့်ဖီဖာကမ္ဘာ့အ player ကိုများနှင့် Laureus အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Real Madrid အသင်း galactico သူတို့ရဲ့အစဉ်အဆက်ကြီးထွားလာလိုင်း-up, သူ့ကိုထည့်သွင်းအဖြစ်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရဲ့, သူ့ကိုအခြားကမ္ဘာ့စံချိန်လွှဲပြောင်းကြေး, ဒီအချိန်€ 39 သန်းရရှိခဲ့သည်။ သူကပင်တက်ရောက်ရန်နှင့်ကုန်သွယ်ရောင်းချမှုများအတွက်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပါဘူးပွဲ၌သူ၏နာမကိုအမှီရွတ် - အောက်တိုဘာလမှတဆင့်တစ်ဝက်တစ်ပျက်သည်အထိဘေးချိတ်ခံနေသော်လည်းရီးရဲလ်ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေတစ်ဦးသူရဲကောင်းများဧည့်ခံနှင့်အတူရော်နယ်ဒိုကကြိုဆိုခဲ့သည်။ သူကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ဘာလုပ်နေလဲ, ရော်နယ်ဒိုသည်သူ၏ပွဲဦးထွက်ပေါ်2ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူပရိသတ်တွေအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူဟာမက်ဒရစ်နှင့်အတူလာလီဂါအနိုင်ရဖို့အတွက်လမ်းအပေါ် 30 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့သွားလေ၏။
ဒဏ်ရာတစ်ခုဆက်ခံနေသော်လည်းရော်နယ်ဒိုကလပ်မှာ 104 နှစ်ပေါင်း၏သင်တန်းကျော်မက်ဒရစ်အဘို့အ 184 ဂိမ်းထဲမှာ5ရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းဖို့သွားလိမ့်မယ်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -Post ကိုမက်ဒရစ်ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် (အနာတရအကျပ်အတည်းနှင့်တစ်ကျော့ပြန်)
Ronado 2006 အတွက်မက်ဒရစ်မန်နေဂျာ Fabio Capello နှင့်အတူမျက်နှာသာထဲကပြုတ်ကျနှင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေဖြင့်ဂိုးသွင်းဘုရင်ရွိုင်း၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအောက်ပါသည်ဘာနေဗျူးမှာလက်ထက်တော်ရေတွက်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 27th 2007 တွင်, ရော်နယ်ဒို€ 7.5 သန်းတန်ဖိုးရှိသဘောတူညီချက်အတွက်အေစီမီလန်များအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 13th 2008 တွင်, Livorno ဆန့်ကျင်နေတဲ့လိဂ်ပွဲစဉ်အတွက်ရော်နယ်ဒိုဂိုးအနိုင်ရထားတဲ့ဗလာကြိုးပမ်းမှုအောက်ပါတစ်ဦးပေါက်ကွဲထွက်ဒူးခေါင်းရိုးရွတ်ခံစားနေရပြီးပြီးနောက်လယ်ကွင်းချွတ် stretchered ခဲ့သည်။
မီလန် 8 ဂိမ်းထဲမှာ 20 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူနေသော်လည်းရာသီ၏အဆုံးမှာမိမိစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့မပြုခဲ့ - ဒါဟာရော်နယ်ဒိုထိုကဲ့သို့သောဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရဖူးမဟုတ်, ပင်ကျော်ကြားမီလန်ကြံ့ခိုင်ရေး Lab မှအစဉ်အဆက်ပြန်လည်ထူထောင်သူ့ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ချက်ကျင်းပခဲ့သောတတိယအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရော်နယ်ဒို၏အဆိုအရ, "ကျနော့်ဘဝကအမြဲစိန်ခေါ်မှုများတစ်စီးရီးဖြစ်ခဲ့သည်နဲ့ကျွန်မစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ထားတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအကြှနျုပျ၏အသက်တာ၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ " - ရော်နယ်ဒို
တစ်နှစ်ကျော်ကျော်များအတွက်အရေးယူမှုထဲကရော်နယ်ဒိုလူတိုင်းကမှားကြောင်းသက်သေပြနဲ့သူ့ရဲ့တတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-ခြိမ်းခြောက်ဒဏ်ရာကနေပြန်သွားဖို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မိမိအဇာတိမြေမှတစ်ဦးကပြန်လာသူတစ်ဦးသူရဲကောင်းများသည်သူ၏မိတ်ဆက်အပေါ်သို့ကြိုဆိုပါတယ်လက်ခံရရှိဘယ်မှာကောရိန္သု, များအတွက်စူပါစတားနိမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တော်မူ၏။
13 လကြာပြင်ပဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းရော်နယ်ဒိုတစ်ဦးလိဂ်နှင့်ခွက်ကိုနှစ်ဆမှသူ့အဖွဲ့ကူညီပေးနေ, 30 ပွဲအတွက် 55 ပန်းတိုင်ကိုယ်တော်တိုင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2010 ကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်တခါထပ်ဘရာဇီးကစားသမားပြန်ခံရဖို့ကိုသူ့အဘို့လည်းသက်တမ်းတိုးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရှိခဲ့သည်။ ဒါကမှတဆင့်မသွားခဲ့ပါဘူး။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -တစ်နောက်ဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားစီမံခန့်ခွဲ
ရော်နယ်ဒိုသည်သူ၏ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်သူ၏အလေးချိန်ကျော်ကြီးပြင်းလျက်ရှိသံသယရှိနေသော်လည်းအဆိုပါ 2006 ကမ္ဘာကြီးဖလား၌ကစားခဲ့။ သူ Gerd Muller ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖောက်တက်အဆုံးသတ်နှင့် 15 ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူအားလုံးအချိန်ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုထိပ်တန်းဂိုးသွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူဟာကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်ပြိုင်ပွဲ၌သူ၏ 27th ရည်မှန်းချက်ကိုဖမ်းဆုပ်, ဇွန်လ 15th အပေါ်ဂါနာဆန့်ကျင်နေတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, ဒီအောင်မြင်ခဲ့။ ဘရာဇီးလေးပုံတစ်ပုံဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်အတွက်ပြင်သစ်ကဖျက်သိမ်းခံရဖို့သွားလိမ့်မယ်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အလေးချိန်ပြဿနာများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နာမကျန်း - ဆေးစစ်သူ hypothyroidism ရှိပါတယ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ရော်နယ်ဒို၏အဆိုအရ, "ဆေးစစ်သောအခါ, ငါသည်သင့်ကိုငါဇီဝြဖစ်နှေးကွေးသည့် hypothyroidism လို့ခေါ်တဲ့တိုင်ကြားစာ, ခံစားနေရပြီးခဲ့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ငါရှိသောကြောင့် Anti-doping (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း) ၏ဘောလုံးအတွက်ခွင့်ပြုမထားကြောင်းအချို့ဟော်မုန်းယူရှိသည်မယ်လို့ကထိန်းချုပ်ဖို့။ ငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယင်း၏အဆုံးခါနီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လန့်ဖြစ်၏။ "
ရော်နယ်ဒိုသို့သော်မိမိအအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်တိုက်ခိုက်နေစောင့်ရှောက်ရန်မိမိအပရိတ်သတ်တွေကတိပြုခဲ့သည်။ ကိုယျတျောသ, သူကသူတို့ကိုမည်သည့်အာမခံခကျြပေးခဲ့သညျဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်, ကအများကြီးရုန်းကန်ပြီးနောက်အားလုံးမျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကိုလူတိုင်းတယ်။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အနားယူကြေညာ
ယခုနှစ်သုံး-အချိန်ဖီဖာကမ္ဘာ့အ player ကိုစီရော်နယ်ဒိုကသူ၏ 18 နှစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆုံးသတ်ဆောင်ခဲ့သောကာစိတ်ခံစားမှုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုခေါ်ခဲ့ရာတစ်ဦးအချို့သောတနင်္လာနေ့ဘောလုံးကွင်းကနေအနားယူကြေညာခဲ့သည်။ ရော်နယ်ဒိုနောက်ဆုံးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 ၌သူ၏အငြိမ်းစားကြေညာခဲ့သည်။
"Ronaldo- အဆိုအရအကြှနျုပျ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှပအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအများကြီးရြှုံးပေမယ့်အဆုံးမဲ့အောင်ပွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုဒါပျော်ရွှင်စေရာတစ်ခုခုကိုစွန့်ခွာရန်အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ စိတ်ပိုင်း, ငါသည်ဆက်လက်လိုချင်ပေမယ့်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းဝန်ခံရန်ရှိသည် တိုက်ပွဲ ငါ့ကိုယ်မှ။ "
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -တစ်ခုကမမျှတကမ္ဘာကြီး (စီရော်နယ်ဒိုနှင့်အတူသူ့ကို Comparing)
တစ်စုံတစ်ဦးကစီရော်နယ်ဒိုနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဖျောပွထားသညျ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာစီရော်နယ်ဒို, Cr7, Cr9 ဖြစ်ပါတယ်။ လူးဝစ် Nazario De Lima ရော်နယ်ဒိုများသောအားဖြင့်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်, '' ဆီရော်နယ်ဒို ',' Mota (အဆီ) စီရော်နယ်ဒို ',' Mottai (ထိပ်ပြောင်) စီရော်နယ်ဒို ',' ထူးဆန်းဆံပင်ဖြတ်ရော်နယ်ဒို ',' တခြားစီရော်နယ်ဒို '' ။
သူ့ကိုသကဲ့သို့အကြီးတစ်စုံတစ်ဦးကဤကဲ့သို့သောအနိမ့်အဆင့်ဆင့်လျှော့ချနှင့်သူအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်အရာကိုမအောကျမေ့နေသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်သူအလေးချိန်သို့မဟုတ်သူ၏ hairdo ဘို့အခါ, ရော်နယ်ဒိုက de လီမာ၏အတော်များများကပရိတ်သတ်တွေစစ်မှန်စွာဝမ်းနည်းပက်လက်ခံစားရသည်။ ဤသည် LifeBogger အချိန်ထဲကယူနှင့်ဖြစ်ကောင်းဘောလုံးသမားများအတွက်အကြီးမားဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပြီးသူတစ်ဦးကကစားသမားတွေအကြောင်းရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးကစီရော်နယ်ဒိုကပြောပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်, သင်တစ်ချိန်ကဖီဖာကမ္ဘာ့အ player ကိုဆုချီးမြှင့်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်ကအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီခဲ့သူဘရာဇီးလ်အနိုင်ရထားပြီးသူပေါ်တူဂီတောင်ပံကစားသမားစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ?. "ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုအပြီးဒီအပေါ်အောက်တွင်သင့်မှတ်ချက် Drop" ။
ရော်နယ်ဒိုလူး Nazario က de Lima ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -LifeBogger အဆင့်
သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သုံးကြိမ်ပြီးသားအချိန်မတိုင်မီချွတ်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ပွီးလြှငျ, သငျသညျယခုသူသည်မိမိအ doubters မှားယွင်းတဲ့သက်သေကိုနှစ်သက်ငါသိ၏။ ရော်နယ်ဒိုအတွက်ကျနော်တို့လုံးဝသုံးကြိမ်ထက်ပို 36 လအတွင်းတစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစုစုပေါင်းအဘို့အဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဘဲလျက်, မိမိဂိမ်း redevelop ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ပြီးသူတစ်ဦးကစားသမားရှိသည်။ ဒါကကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်အတွက်သူ့ကိုစဉ်းစားအရာဖြစ်တယ်။
PSV Eindhoven ဘောလုံးဒိုင်ယာရီ
refurbished Iphone 5C 23 တွင် 2018၊9- 13 နံနက်
စာအရေးအသား၏ဤအပိုင်းအစအတွက်အရာရာပြောပြသင့်ရဲ့ method ကိုအမှန်တကယ် fastidious ဖြစ်ပါသည်, အားလုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်
ဒါဝိဒ်သည် Araniva ဇွန် 24, 2018 မှာ 8: 49 နံနက်
အလွန်စိတ်ကူးပါ။ ငါတန်ဖိုးထားသင့်ရဲ့ပုံပြင်ကိုဖတ်ပါ။ ရော်နယ်ဒိုနေဆဲအကြီးကောင်လေး။ မိမိအဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Yh Nabil အောက်တိုဘာ 5, 2018 တွင် 10: 50 ည
Cr9 သင်ဤအပိုင်းအစ gadget ကတကယ်ကိုတို့သည်ကြီးစွာသောခြေလျင် balle.and ကြီးကအားဖြင့်ငါတို့သည်ပျော်ရွှင်
Adriano ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Zinedine ဇီဒန်းကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်